नेकपा सचिवालय बैठकमा यसकारण फेरियो प्रचण्डको आसन ! – Sagarmatha Online News Portal
नेकपा सचिवालय बैठकमा यसकारण फेरियो प्रचण्डको आसन !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ सुरु भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एउटै लहरमा कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिका बैठकहरुमा प्रचण्डलाई अरु नेताहरुसँगै राखिएको थियो । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गरेर नेकपा बनेपछि ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष छन् । वरियता क्रममा ओली पहिलो र प्रचण्ड दोस्रो नम्बरमा भएपनि दुबै समान हैसियतका अध्यक्ष थिए । तर मंसिर २०७५ को सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिने र ओलीले पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने निर्णय भएको थियो ।
शनिबार बसेको बैठकमा प्रचण्डको आसन फेरिएको छ र ओलीकै लहरमा कुर्सी राखिएको छ । अध्यादेश लगायतका विषयमा चौतर्फि आलोचना खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयमै अल्पमतमा पर्ने संकेत थाहापाएपछि प्रचण्डलाई आफ्नै लाईनको कुर्सीमा राखिएको अनुमान लगाउन त्यत्ति गाह्रो नभएको एक नेताले बताए ।
बुधबार बसेको सचिवालय समितिको बैठक ।